Ọdụ ụgbọ elu Budapest ka ejikọtara ya na Aeroflot
Location: Mbido » Ịdee » Airlines » Ọdụ ụgbọ elu Budapest ka ejikọtara ya na Aeroflot
Na azụ nke ndekọ ndekọ ya na afọ, Budapest Airport kwadoro nkwenye siri ike nke njikọta njikọ ya na ụgbọ elu ụwa na Aeroflot. Na-ekwupụta ụgbọ elu nke atọ kwa ụbọchị na Moscow Sheremetyevo site na 29 Ọktọba, SkyTeam ụgbọelu ga-enyefe oche 7,000 kwa izu ụzọ isi ya na ọdụ ụgbọ elu Russia nke kachasị na Russia (maka ndị njem).
Ndị ọrụ 186-oche 737-800s nke ụgbọelu ọkọlọtọ, ọrụ ịrị elu nke Aeroflot ga-ahụ njikọ dị mma site na Budapest ruo ọtụtụ ebe ndị Asia dị gụnyere Hanoi na Ho Chi Minh City na Vietnam, isi obodo South Korea nke Seoul, Beijing, Shanghai na Guangzhou na China, yana Bangkok na Phuket na Thailand. Balázs Bogáts, Onye isi nke Development Airline na Budapest Airport kwuru, “Nke a bụ ụzọ agam n’ihu gosipụtara nke ọma ma anyị gbalịsiri ike ime ka ọrụ a ka mma site na nnweta nnweta nke Aeroflot nke Asia. Ọ gbakwụnyere, sị: "Ọrụ ọzọ nke Aeroflot ga-eme ka anyị jikọọ nke ọma site na njikọ nke onye ọlụlụ anyị na-eweta ọfụma ọzọ na netwọkụ ụwa anyị."
Aeroflot bụ ụgbọ elu ụgbọ mmiri Russia na onye otu SkyTeam ụgbọ elu ụgbọ elu zuru ụwa ọnụ. Na 2016, ụgbọ elu ahụ buru nde ndị njem 29 (nde mmadụ 43.4 dị ka Aeroflot Group gụnyere ndị enyemaka). Na 2016, Skytrax nyere Aeroflot ọkwa anọ nke ọdụ ụgbọ elu nke anọ, ma kpọọkwa ya Ọdụ ụgbọ elu kacha mma na Eastern Europe maka oge nke ise na Skytrax World Airline Awards. Dabere na Moscow, na Sheremetyevo International Airport, Aeroflot na-arụ ọrụ otu n'ime ọdụ ụgbọ mmiri kacha nta n'ụwa nwere ụgbọ elu 197.
N'ịgba akaebe 64% kwa afọ, ọrụ nke atọ nke Aeroflot ga-ahụ oche oche 135,000 ọzọ site na Budapest ruo Moscow Sheremetyevo n'oge W17 na S18 na afọ gara aga. Na-agbago n'akụkụ arụmọrụ na Moscow Vnukovo, ọdụ ụgbọ elu isi obodo Hungary ugbu a na-enye ngụkọta nke ụgbọ elu 29 kwa izu na Russia. Flightgbọ elu ndị ọzọ na W17 rutere na 9:30 nke ụtụtụ na BUD wee pụọ na Moscow na 10:30 am CEST iji rute ebe ọ na-aga na 3: 00 pm Moscow.
Na-eje ozi n'ahịa mba iri anọ na abụọ, arụmọrụ ndị ọzọ ga-ahụ Russia ka ọ gafere Switzerland na Israel dị ka ahịa mba asatọ kachasị si Budapest. Site na ụgbọ elu 42 kwa izu site na ọnụ ụzọ Hungary, Aeroflot ga-awụlikwa elu n'ihu ndị ọrụ ibe ya na Budapest n'oge oyi a, bụrụ otu n'ime njikọ kachasị mma na usoro izu ụka kwa izu, yana Turkish Airlines, KLM na Air France na-agbasa ọdụ ụgbọ elu. ụwa ebe njedebe.
Crystal Lagoons: Osimiri n'akụkụ ọ bụla n'ụwa